နိဒါန်း သို့ အဆိုပါ အရစ်ကျ နည်းလမ်း ၏ ကောင်းသော သေးငယ်သော အခင်အရှင် လျှပ်စစ် စက်ကိရိယာ - Zhejiang Aoxiang auto-ထိန်းချုပ်ရေး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အဆိုပါတိကျစွာသေးငယ်တဲ့အဆို့ရှင်လျှပ်စစ်ကိရိယာမောင်းနှင်မှုအရင်းအမြစ်နှင့်ခက်, DC ကလက်ရှိအဖြစ်မော်တာကိုအသုံးပြုပြီးထိန်းချုပ်အချက်ပြမှုဖြစ်ပြီး, အဓိကအားထားတဲ့အော်ပရေတာတစ်ဦးအသံချဲ့စက်နှင့်တစ်ဦး actuator ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဒီသေးငယ်တဲ့အငယ်အဆို့ရှင်လျှပ်စစ်ကိရိယာနှင့်အတူ, အပူချိန်အခြေခံအားဖြင့်ကို C ° 50 လောက်တစ်ဦးမှာထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဒဏ်ငွေသေးငယ်တဲ့အဆို့ရှင်လျှပ်စစ် device ကို installation နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေခံလိုအပ်ချက်များ
1. မရွေးအဆို့ရှင်လျှပ်စစ်ကိရိယာနှင့်အညီအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် parameters တွေကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ အထွေထွေမော်ဒယ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုလည်းကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ရွေးချယ်ခြင်းအခါ parameters များကိုမှန်ကန်သောရှိမရှိအာရုံစိုက်ဖို့သေချာပါစေ။ ထို့အပြင်, မော်တာပါဝါများတွင်လျစ်လျူရှုမဖြစ်သင့်စသည်တို့ကိုလက်ရှိ, ထိန်းချုပ်မှုကွင်းဆက်ဗို့အား, သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
2. အဆို့ရှင်၏ torque ရဲ့အဆိုအရသူကအခြေခံအားဖြင့်အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများကရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအဆို့ရှင်၏ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲ torque အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်တွင်နှင့်အဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖိအားအရသိရသည်ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့ကြောင့်, ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူအသေးစားနှင့်အသေးအဆို့ရှင်လျှပ်စစ် device ကိုရွေးချယ်ထားပါသည်။ ဒါကမှတ်ချက်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါနှစ်ချက်ကိုထိရောက်စွာလူတိုင်းကိုကူညီဖို့မျှော်လင့်ခြင်း, အသေးစားနှင့်အသေးအဆို့ရှင်လျှပ်စစ်စက်ကိုစျေးကွက်၏အကြီးတန်းဝန်ထမ်းအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကအချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုငါ့ကိုပြင်ပေးပါ။